Ogaden News Agency (ONA) – Siday uga qaybgaleen bandhig-faneedkii Oslo jaaliyadda S.Ogadenya ee Norway
Siday uga qaybgaleen bandhig-faneedkii Oslo jaaliyadda S.Ogadenya ee Norway
Oslo- Waxaa goor dhaweyd si aad qurux badan loogu soo gaba-gabeeyey badhtamaha magaaladda Oslo ee dalka Norway, gaar ahaan goobta lagu magacaabo Grønland, bandhig-faneeedka lagu magacaabo daray ‘Geeska Afrika’ ( East Africa Festival), oo sanadka ahaa mid aad uga duwanaa sanadadii hore.
Bandhig-faneedkan oo ay kasoo qeyb-galeen dadweyne aad u badan oo ka kala yimid magaaladda Oslo iyo nawaaxigeeda, saxafiyiin iyo masuuliyiin kale ayaa lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, ciyaar dhaqameedyo kala duwan, dhaanto, heeso badan oo isugu jiray wadani iyo jacayl.
Waxaana kamdi ahaa Fanaaniinta sida aadka ah loola dhacay heesahooda ee wacdaradda ka dhigay bandhig-faneedka geeska Africa sanadkan, Fanaanka weyn ee Abdi Badil, Nimco Jibaax, Abdi dheere iyo fanaanka reer Oslo ee Mahad.
Dhanka kale, waxaa iyana dhankooda hadalo ku saabsan munaasabadda maanta barxadda weyn ee caasimadda Oslo, goobta lagu magacaabo Grønland , khudbado qiimo leh kasoo jeediyey siyaasiyiin iyo wax-garadka ku dhaqan caasimadda Oslo; waxaana kamid ahaa dadkii goobta ka hadlay:-
Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaalidda Ogadenia ee Norway, Mudane A/rahman Sheekh. Yusuf.
Xildhibaan Soomaaliyeed oo kujira golaha deegaanka Oslo, Mudane Baashe, iyo
Madax kamid ah ururuka Tayo ee dalka Norway, Mudane Abdi Tahliil (dhagaweyne).
Sidoo kale, bandhig-faneedkan ayaa waxaa si qurux leh uga soo qeyb-galay ururka dhalinyaradda Eritrea, oo madasha lagu marti-qaaday. Bandhig-faneedka East-Africa ayaa ku soo dhamaaday guul iyo jawi aad u qurxoon.